““သက်ကြီးတို့လည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပျော်သည်”” | ဥက္ကာကိုကို
စာပေ အနုပညာ မီဒီယာ	ကဗျာရှည်များကိုယ်ရေးအကျဉ်းတားရော့ပညာရပ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာပြောခဲ့ပါ(C-Box)တာရာမင်းဝေ
““သက်ကြီးတို့လည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပျော်သည်””	Posted by oakkarkoko on January 19, 2013
Posted in: 7DAY NEWS Journal, အက်ဆေး, ဆောင်းပါး.	Leaveacomment
Photo by- Google
နံနက် ခြောက်နာရီခွဲတိတိမှာ Desktop ကွန်ပျုတာလေးကို ဦးမျိုးလွင်စဖွင့်လိုက်သည်။ မကြာမီမှာပဲ အွန်လိုင်း ပေါ်သို့ ဦးမျိုးလွင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အွန်လိုင်းပေါ် တက်တက်ချင်း သူစဖွင့်တာက သစ်ထူးလွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာ သတင်းထူးတွေ ဖတ်ရမည်။ ပြီးလျှင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မိတ်ဆွေများ၊ သားမြေး၊ တူမများပေးပို့ထားသော မေးလ် တွေကို ဖွင့်ဖတ်မည်။ ထို့နောက်မှာတော့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကို ဦးမျိုးလွင်စတင်သုံးစွဲပါတော့သည်။
Facebook ကို စသုံးစဉ်က သူများတွေရေးထားသော ပို့စ်များကိုသာဖတ်ရှုခဲ့၊ Like လုပ်ခဲ့ရာမှ အခုတော့ ဦးမျိုး လွင်တစ်ယောက် မှတ်ချက် Comment များရေးသားခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်များကို Status ရေးသားခြင်းတို့ကို ပြု လုပ်တတ်လာပြီဖြစ်သည်။ Facebook Status ပေါ်က What’s on your mind ဆိုတဲ့စာသားလေးကို သူ သဘောကျနေခဲ့ သည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် အငြိမ်းစားယူထားသော ဦးမျိုးလွင် မှာ အသက်အရွယ်အရ ၇၁ နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်သော်လည်း ပေါ့ပါးသွက်လက်ဆဲဖြစ်သည်။ အမေရိကားတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက်နေသည့် တူမဖြစ်သူညွှန်းဆိုမှုကြောင့် Gtalk နှင့် Blog များကိုသာ သုံးစွဲနေခဲ့ရာမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Face book အကောင့်တစ်ခု စဖွင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တူမ၏ သင်ကြားမှုဖြင့် Facebook ပေါ်မှ မိတ်ဆွေများ တင်ထားတာတွေကို လိုက် ဖတ်ရင်း Facebook ကို တဖြည်းဖြည်းနှစ်သက်စွဲလမ်းလာခဲ့သည်။
““စွဲသွားတာ။ လူငယ်တွေအခေါ်အရဆိုရင် ပိုးဝင်တာပေါ့””ဟု သူကပြောသည်။
အသက် ခြောက်ဆယ်ကျော်လျှင် လူကြီးပိုင်းထဲဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်အင်အားနှေးကွေးခြင်းမျိုး လည်းဖြစ်လာတတ်သည်ဟု ဦးမျိုးလွင်က ယူဆထားသည်။ ပင်စင်စားများအနေဖြင့်လည်း ကိုယ်ကျင်လည်ခဲ့ရာ ပတ်ဝန်း ကျင်ကြီးထဲမှ ခွဲခွာလာရသည့်အတွက် အထီးကျန်သည့် စိတ်သဘောမျိုးလည်း ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသည်။ သားသမီး မြေးမြစ်များနှင့် နွေးထွေးပျော်ရွှင် စွာနေထိုင်သွားကြသူများရှိသကဲ့သို့ တစ်ကိုယ်တည်းအဖော်မဲ့ရှာသူများလည်း ရှိစမြဲ ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် များသော အားဖြင့် လောကုတ္တရာတရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်လွန်တတ်ကြသလို လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုသွားကြတတ်ကြသည်။ မည်သို့နည်း လမ်းများ ဖြင့်ပင်ဖြစ်စေ Facebook ကိုသုံးစွဲနေကြသည့် လူကြီးပိုင်းများအနေနှင့်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဝေးကွာခြင်းမရှိ ဘဲ ပိုမို၍ ပင် နုပျိုတက်ကြွလာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ယခင်နှစ်များကထက် သိသာစွာကျယ်ပြန့်လာသော Facebook စာမျက်နှာပေါ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံသား လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းများသာမက အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်လူကြီးပိုင်းများပါ ၀င်ရောက်သုံးစွဲလာကြပြီဖြစ်သည်။ အများဆုံး သုံးစွဲ ကြသည့်လူကြီးပိုင်းများမှာ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအငြိမ်းစားများ၊ အင်ဂျင်နီယာအငြိမ်းစားများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအငြိမ်းစားများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်။
ပင်စင်စားအရွယ်များ Facebook သုံးစွဲလာခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အထီးကျန်မှုများကို ဖြေဖျောက်နိုင်မည်ဖြစ်သလို မိမိတတ်ကျွမ်းထားသော ပညာရပ်များကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြင့်လည်း လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုစေနိုင်သည်ဟု ဦး မျိုးလွင်က သုံးသပ်သည်။
““ပင်စင်စားတွေဆိုတာ ပညာတတ်တွေ။ အတွေ့အကြုံများတယ်။ အထီးကျန်နေမယ့်အစား နောက်လူငယ်တွေ ကိုပညာဖြန့်ပေးစေချင်တယ်။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အလုပ်မရှိဘဲ ကုန်သွားမယ့်အချိန်တွေကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချစေချင်တယ် ””ဟု သူက ပြောသည်။
အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်းသည် အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ Facebook ကို လည်း စပေါ်စဉ်ကတည်းက သုံးစွဲလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာများ၊ ပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုများ သာမက သတင်းများကိုလည်း ဖတ်ရှုဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောသည်။ ထို့အပြင် Facebook ကို ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်းနှစ်သက်သည့် တစ် ချက်က Farmville Game ကိုကစားရခြင်းပဲဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
““ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့ အပင်လေးတွေ ပွင့်လာသီးလာရင် ငါလုပ်ထားတာလေး အောင်မြင်ပြီဆိုပြီး ပျော်တယ်။ ပြီး တော့ အချင်းချင်း Game Request တွေလုပ်ပြီး ကိုယ့်ရှိတာ သူ့ပေး။ သူ့ရှိတာ ကိုယ့်ပေးဆိုတော့ တအားရင်းနှီးလာကြ တာလို့မြင်တယ်””ဟု ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်းက အပင်များစိုက်ပျိုးရသည့်ဂိမ်းအား နှစ်သက်ရသော အကြောင်းရင်းကို ပြောပြ သည်။
အစိုးရ၀န်ထမ်းအဖြစ်မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ထွက်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းဖွင့်ထားသည့် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်း ၏ Facebook သုံးစွဲမှုသက်တမ်းမှာ သုံးနှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်သလို သူမ၏ သားများကိုလည်း Facebook သုံးစွဲကြရန် တိုက် တွန်းအားပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook ကို များသောအားဖြင့် လူငယ်ပိုင်းသုံးစွဲမှု ပိုများသည့် အတွက် Facebook မှာပင် အချိန်ကုန်နေကြခြင်းသာမက လွတ်လပ်မှုကို တလွဲဆံပင်ကောင်းအသုံးချမှုများလည်း ရှိနေခဲ့သည်။ ဝေဖန်ခြင်းသက်သက် မဟုတ်သော တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ၀ါဒဖြန့်လှုံ့ဆော်မှုများရှိသကဲ့သို့ ကောလဟာလများလည်း လျှင်မြန်စွာပျံ့နှံ့တတ်ရာ လူမှု စာမျက်နှာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
““သုံးတတ်ရင်အကျိုးရှိတယ်။ မကြိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။ သူများကိုအပုတ်ချတာမျိုးပေါ့။ Personal တွေပါ လာတတ်တယ်။ ပြီးတော့ မဟုတ်ကဟုတ်ကပုံတွေမတင်သင့်ဘူး။ ကိုယ်ကြားတာလေးနဲ့လည်း မတင်သင့်ဘူး။ မှန်ဦး တော့၊ ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိရင် မတင်သင့်ဘူး””ဟု ဦးမျိုးလွင်ကသုံးသပ်သည်။
အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ စာရေးဆရာ မင်းဒင်ကလည်း ““တချို့က ဘာအကျိုးအပြစ်မှ မမျှော်မြင်ပဲ တင်ချင်ရာ စွတ်တင်၊ ပြောချင်ရာ စွတ်ပြောတာတွေကြောင့် အာရုံ နောက်စရာတွေလို့ ခံစားရတယ်။ အများသိ သင့်တယ်၊ ဖတ်သင့်တယ်၊ သိပါစေ ဖတ်ပါစေဆိုပြီး မျှဝေကြတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာတွေကတော့ စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေပါ တယ်””ဟု ဆိုသည်။
Facebook ၏ အသုံးဝင်မှုကို သိရှိလာကြသည်နှင့်အမျှ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များပါ Facebook စာမျက်နှာ ပေါ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ လူကြီးပိုင်းများကတော့ သတင်းအချက်အလက်ကို ဦးစားပေးသိလိုကြသည့် အတွက် အဓိကသုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။ ဂျာနယ်များတွင်ဖော်ပြထားသည်ထက် ပိုမိုစုံလင်သော သတင်းအချက်အလက်များက သူတို့ အတွက် အဖော်ပြုစရာလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်သောနယ်ပယ်မှ လူကြီးပိုင်းများလည်း Facebook ကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချလာကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
““သတင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ ဒါတွေအားလုံးက ဖေ့စ်ဘွတ်ကို သတိထားမိ တာ၊ အားလုံးက ဖေ့စ်ဘွတ်ကို source အနေနဲ့သုံးလာကြတာတွေ့တယ်။ နောက်တစ်ခုကလည်း သတင်းကိုရှဲလ် လုပ်ချင် တဲ့လူတွေ ကိုယ့်ရဲ့ဝေါပေါ်ကနေ ပိုစ့်လုပ်ကြတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့ပေးချင်တဲ့မတ်ဆေ့ခ်ျကလည်း ရောက်သွားတာပေါ့”” ဟု Facebook ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စတင်သုံးစွဲခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးလှမောင်ရွှေက ပြော သည်။
ဦးလှမောင်ရွှေက အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၆၀ ၀န်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး Facebook ကို သူ၏လက်ထောက်လူငယ် များသုံးစွဲခြင်းကို မြင်၍ စသုံးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ အလုပ်ချိန်အားလပ်လျှင် အနည်းဆုံးသတင်းများကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှုဖြစ်ပြီး တစ်နေ့လျှင် နှစ်နာရီမှ သုံးနာရီခန့် သုံးစွဲဖြစ်ကြောင်း သူကဆိုသည်။
““အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ ၊ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ချက်ချင်းသိနိုင်တာ facebookပဲရှိတယ်” ဟု တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ နယ်စပ် ရွှေလီမြို့တွင် နေထိုင်သော အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ် စစ်ရေး၊နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောက ပြောသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် Facebook သုံးစွဲမှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်အတွက် ဦးအောင်ကျော်ဇော က ကျော်ခွသည့် Proxy များအသုံးပြုကာ သုံးစွဲနေရခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ Facebook သုံးစွဲမှုသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်မရှိသေး သော်လည်း တစ်ရက်လျှင် ခြောက်နာရီခန့်ပုံမှန်သုံးစွဲလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
“““နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ facebook မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို shareလုပ်ပါတယ်”” ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇော ဆိုသည်။
Facebook မပေါ်ခင်က သတင်းများကိုဖတ်ရှုလိုလျှင် ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာသိမှသာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အတွက် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများအနေဖြင့် နည်းပညာအားနည်းမှုကြောင့် အခက်အခဲရှိခဲ့ရသည်ဟု သူကပြောသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ(ရွှေဇီးကွက်)၊ ဆရာမဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ စာရေးဆရာကျော်ဝင်း၊ စာရေးဆရာကြီး မောင်မိုးသူ၊ ဦးထွန်းလွင်(မိုးလေ၀သ) စသည့်နာမည် ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း Facebook စာမျက်နှာကို သုံးစွဲနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
လူငယ်ပိုင်းများပြားသော Facebook တွင် လူကြီးပိုင်းများဝင်ရောက်သုံးစွဲလာကြခြင်းက မျိုးဆက်နှစ်ခုအကြား ခြားနားမှုရှိမသွားဘဲ ခေတ်နှင့်အညီ စီးဆင်းမျောပါနိုင်ကြသည်ပဲ ဖြစ် သည်။
““လူငယ်ထုနဲ့အတူ တစိတ်တပိုင်းသာ စီးမျောလိုက်ပါနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်လူငယ်အများစုက ဖေ့စ် ဘွတ်မှာ တရေးနိုးထကြည့်လည်း တင်နေ ရေးနေကြတုန်း။ မီးစိမ်းဝိုင်းလေး ပေါ်နေတုန်း။သူ့ခတ်နဲ့တော့ သူတွင် ကျယ် မယ်ပေါ့””ဟု အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် စာရေးဆရာ မင်းဒင်က ပြောသည်။
““လူငယ်တွေဖေ့စ်ဘုတ်အရမ်းသုံးတာတော့ မကြိုက်ဘူး။ ဒီထဲမှာချည်းပဲ အချိန်ကုန်နေကြတယ်။ ကောင်းတဲ့ ဘက်ကဆိုရင် သတင်းတွေကိုအချိန်မြန်မြန်သိလာရတယ်ပေါ့။ ဘဘရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကို သူများတွေလုပ်ပေးတာ။ အဓိက ပြောချင်တာက ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးသလို စာကိုလည်းများများဖတ်ကြစေချင်တယ်။ အခုခေတ်လူငယ်တွေ စာဖတ်အားနည်း ကြတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲမှာပဲ အချိန်ပြည့်မရှိစေချင်ပါဘူး””ဟု Facebook သုံးစွဲနေသူ စာရေးဆရာကြီးမောင်မိုးသူက လူ ငယ်များကို အကြံပြုသည်။
ဦးမျိုးလွင်တို့ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်းတို့ကတော့ လူကြီးပိုင်းများ Facebook သုံးစွဲခြင်းကို ““ဖြစ်သင့်သည်””ဟု အားပေး ကြသည်။
““ခြောက်ဆယ်ကျော်ရင် မြန်မာတွေက စိတ်ကျသွားတတ်တယ်။ အင်တာနက်မှာ ပညာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀တွေဟာ အမြဲရှင်သန်နေတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက မြန်နှုန်းမြင့်နဲ့ သွားနေတယ်ဆိုတာကို သိလာမယ်။ ပင်စင်စားတွေ
က ကိုယ်တတ်တဲ့ပညာတွေကို လူငယ်တွေဆီ Sharing လုပ်ပြီး မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိစွာ ဆက်လက်ဖြတ် သန်းသွားစေချင်တယ်””ဟု ဦးမျိုးလွင်က ပြောသည်။
““အသက်ကြီးလာတဲ့သူအဖို့ facebookသုံးရတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုလည်း ချက်ချင်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်။Facebookက အရမ်းလွတ်လပ်တယ်”” ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇောကဆိုသည်။
အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဝင်းကလည်း သက်ကြီးပိုင်းများ Facebook သုံးစွဲခြင်း အပေါ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းအားပေးခဲ့သည်။
““အခုခေတ်အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ အရမ်းကံကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ Facebook လိုဟာမျိုးရှိနေတာ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်အထီးကျန်နေတယ်လို့ မခံစားရတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက်ရှိလာတယ်။ ဒီတော့ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ Facebook သုံးတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ အားပေးတယ်””။
နံနက်ခြောက်နာရီမှ ၉ နာရီအထိ G-mail ဖတ်ခြင်း၊ သတင်း Blog ဖတ်ခြင်း၊ Facebook သုံးစွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ် ပြီးပါက ဦးမျိုးလွင်တစ်ယောက် သူပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော ရတနာ့မေတ္တာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းရုံးခန်းသို့ သွားရောက်ရ မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံ အိမ်ပြန်ရောက်ပါက ည ၉ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ခေတ္တသုံးစွဲလေ့ရှိသေးသည်။
ယခင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်စဉ်က အဆိုအမိန့်များ၊ မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်များ စသ ဖြင့် သူကြိုက်နှစ်သက်သည့် စာတိုလေးများကို ကူးယူသိမ်းဆည်းထားခဲ့သော ဦးမျိုးလွင်က Facebook ပေါ်မှ သူ့မိတ်ဆွေ များကို ပြန်လည်မျှဝေနေပါလိမ့်မည်။
ဒီကြားထဲမှာ လမ်းသွားရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရင်း Facebook သုံးစွဲလိုပါက အလွယ်တ ကူသုံးနိုင်ရန်အတွက် Galaxy Tablet တစ်လုံးနှင့် Samsaung Galaxy Ace ဖုန်းလေးတစ်လုံးကို ၀ယ်ယူထားပြီဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးနှင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်လုံးက သူနှင့်အတူမခွဲမခွာရှိနေသမျှ သူအထီးမကျန်တော့ပါ။
အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အငြိမ်းစားကြီး ဦးမျိုးလွင်က သူလိုအပ်သည့်တစ်ခုကိုသာ ပြောပါသည်။ ““အရေးကြီးတာက အင်တာနက် Speed ပဲ”” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
← ““အပြေးကောင်းသော ကျွန်တော်နှင့် တရားဥပဒေကို စိန်ခေါ်နေသော လူမိုက်များ””	““ဘိုင့် ဘိုင် ချက်ကြီး”” →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
PDF ဖိုင်ဖြင့်ဖတ်ရှုရန်အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း
လောကကြီးကို ပျက်ရယ်ပြုတတ်ဖို့ရာ မိုးနဲ့အတူ ရွာခဲ့တယ်….
ဒိုင်ယာရီ	ဒါ.... နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါ ကဗျာဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့ လွင့်မျောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် သုညတစ်လုံးကို .....
လက်ထဲမှာကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရွာသွန်းနေရတဲ့ ....
အနံကြီးကွင်းကျယ် ကဗျာထမ်းလမ်းလျှောက်တစ်ကောင်။ ကဗျာအယောင်၊ စာပေအယောင် သတင်းထောက်အယောင်၊ ဘလော့ဂါအယောင် အယောင်ပေါင်း တစ်သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ကိုယ့်မင်္ဂလာ ကိုယ်ဆောင်ပြနေသူသာ......။
ကဏ္ဍများ	7Day Daily (2)
7DAY NEWS Journal (14)
Update News (2)
မာတိကာ	Facebook password reset
Somebody requestedanew password for your Facebook account
Deactivation Request Received
Facebook password change
Facebook password reset
သြစတေးလျနိုင်ငံမှ မာစတာဘွဲ့ကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီး စုပုံချစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိ (ရုပ်/သံ)
ငမိုးရိပ်ချောင်းရေတက်မှုဒဏ်ကို ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ်ရှိ အိမ်ခြေတစ်ထောင်ကျော် နှစ်စဉ်ခံစားနေရ (ရုပ်သံသတင်း)
(၆၇)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့မြင်ကွင်းစုံ (ရုပ်သံသတင်းတင်ဆက်မှု)
တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုမရှိသော လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးမည်
ကုသစရိတ်မတတ်နိုင်၍ လူနာကြိုးဆွဲချ သေဆုံးခဲ့သောဖြစ်စဉ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ စတင်စစ်ဆေး
လက်သည်း ခြေသည်းတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့ စားသင့်တာတွေ
ခုံနေရာ မလွတ်တော့သဖြင့် MH-17 နှင့် မလိုက်ပါဖြစ်ခဲ့သည့် မိသားစု
ဒီကေဘီအေ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောလားပွယ် မွေးနေ့ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပ
အဖတ်များဆုံးပို့စ်တွေ	ဖို-မ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ပညတ်တော်များ(အစ္စလာမ်)	မှတ်ချက်တွေ	သ on ဖို-မ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း…ဝေလ on မောင်ဥက္ကာနှင့် အပြောအဆိုkyinnarthu on ““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော…http://letusfeast.co… on သြစတေးလျနိုင်ငံမှ မာစတာဘွဲ့ကို…Http://Www.Luckyridg… on သြစတေးလျနိုင်ငံမှ မာစတာဘွဲ့ကို…မွန်ရာ on ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)အကြောင်းတစေ့တ…aungaungline on နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိ…Anonymous on ခရီးသည်shwepoesone on ငါသေခဲ့သော်…..မွန်ဆွေဆွေ on ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)အကြောင်းတစေ့တ…Anonymous on ““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော…wannachitwin on မမျှော်လင့်သောအရှုံးko ko on ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)အကြောင်းတစေ့တ…ကံမသား on ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့မောင်ဥက္ကာကံမသား on လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ လွဲမှားခြင်း ဒဏ္ဍ…	လည်ပတ်သူဦးရေ	44,247 ယောက်
Blogs I Followဥက္ကာကိုကိုWordPress.comယခင်လများ	September 2016
ကျနော့်ရဲ့ FB Profile	ဥက္ကာ ကိုကိုCreate Your Badge
ကျနော့်ရဲ့ FB Page	ဥက္ကာကိုကိုPromote Your Page Too
ပါရမီရှင်လေး မေသက်ထားဆွေရဲ့ အနုပညာ	ကဗျာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းထွက်ပြီတစ်ပတ်အတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို တစ်စောင်တည်းဖတ်ရုံဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိလိုရင်... 7Day News ကို ရွေးလိုက်ပါ.....။ (သတင်းထူး၊ ဆောင်းပါးများ၊ ကဏ္ဍစုံလင်စွာဖြင့်....) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၇၂၁၅၇၈ ၊ ၂၄၃၅၄၂။
ပြောမယ်Top ClicksNone7Day Daily 7DAY NEWS Journal Update News ကဗျာ ခံစားချက်တွေ ဓာတ်ပုံ ပန်းချီဆောင်းပါး ရသစာစုလေးများ ရုပ်သံ လတ်တလောသတင်းများ သတင်းဆောင်းပါး သရော်စာ ဟာသများ အက်ဆေး အင်တာဗျူး ဆောင်းပါး ရောက်တတ်ရာရာ ပြောချင်တာပြောမယ် ၀တ္ထု သူ့မှာတမ်း	သူတို့အဆုတ်၊ ထားမြှုပ်ခဲ့သည့်
(မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ ၁၉၆၃)
လှိုင်းတက်ရာ ဗေဒါတက်၊ လှိုင်းသက်ရာဆင်း။
အဆင်းနဲ့အလာ၊ ဗေဒါမ အထွေး။
အုန်းလက်ကြွေ သူ့နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး။
နောက်တချီ ဒီတလုံးက၊ ဖုံးလိုက်ပြန်ပါ
မြည်လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ
တလံကွာ လှိုင်းအကြွံ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ
ချောင်းအဆွယ် မြောင်းငယ်ထဲက၊ ဘဲထွက်လို့လာ
ဘဲအုပ်မှာ တရာနှစ်ရာ၊ ဗေဒါက တပင်ထဲ
ဥက္ကာကိုကိုစာပေ အနုပညာ မီဒီယာWordPress.comWordPress.com is the best place for your personal blog or business site.